Kooriyaan Kaabaa waamicha nageenyaa Kooriyaa Kibbaa fudhachuu didde - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaan Kaabaa waamicha nageenyaa Kooriyaa Kibbaa fudhachuu didde
Koooriyaan Kaabaa fuulduratti Kooriyaa Kibbaa wajjin mari&apos;achuu akka hin barbaannee fi murtoo kanaan &apos;&apos;dogoggora gocha Kooriyaan Kibbaa uumteeni&apos;&apos; jetti.
Ibsa kanas haasaa Pirezidanti Kooriyaa Kibbaa Muun Jayi-in Kamisa kaleessaa kennanif deebii kennuuf ibsa baaste.
Kun otoo kanaan jiruu, Jimaata ganamaan Kooriyaan Kaabaa misaayiloota lama shaakalaaf qarqara baha biyyattirraaa gara galaanaatti dhukaasuu Kooriyaan Kibbaa beeksifteetti. Ji&apos;oota tokko keessaatti shaakala wal fakkaataa 6 shaakalteetti.
Koriyaan Kaabaa torbe tokkotti yeroo 3ffaaf misaa&apos;eela shaakalte
Kooriyaan Kaabaa doolaraa bln. lama hatte
Dhukaasni misaayilaa kun lamaanuu 230km furguggifamuun ol fageenyaa km 30 qaqqabuu Kooriyaan Kibbaa beeksifteetti.
Hogganaan biyyattii Kim Joong-un Pirezidantii Ameerikaa Donaald Tiraamp ji&apos;a Waxabajjii darbe mariin niwukilara hiikachuu akka eegalamu waliigalanis, shaakala addaan hin kunne.
Kooriyaan Kibbaa maal jetti?
Haasaa yaadannoo Kooriyaan bulchiinsa Jaappaan jalaa bilisummaa argatte irratti pirezidanti Muun bara 2045tti dachee Kooriyaa lamaan tokkoomsuuf waadaa seenan.
Biyyoonni lamaan bara xumura waraanaa addunyaa lammaffaa addaan bahan.
Pirezidanti Moon galmii niwukilara dachee Kooriyaa irraa niwukilara hiikkachuu dhimma baay&apos;ee murteessaa akka ta&apos;e mariin biyyoota lamaanii firii otoo hin buusiin, jijjiirama malee hafe kanarratti kana dubbatan.
Goodayyaa suuraa Pirezedanti Kooriyaa Kibbaa Moon Jayi-in
Haasaa TV irratti dhiyeessaniin &apos;&apos;Dachee Kooriyaa haaraa, waa tokkicha badhaadhinaa fi nagaa fidu, Baha Eeshiyaa fi addunyaan nu eegaa jira,&apos;&apos; jedhanii dubbatan.
Deebii Kooriyaa Kaabaa
&apos;&apos;Wayita Kooriyaan Kibbaa Ameerikaa wajjin shaakala waraanaa itti fufte kanatti hiikni waligaltee maali ammatti jechuun gaaffi kaasti Kooriyaan Kaabaa. Dinagdee nagaa qabuu ykn bulchiinsa nagaa jedhanii haasa&apos;uun ammatti yeroo sirrii miti jetti.
Haasaa pirezedant Moon fudhatama dhabsiisuuf,&apos;&apos; tapha waraanaatiin karoora guyyoota 90 keessatti loltoota keenya dhabamsiisuuf otoo karoorfamuu mariin biyyoota Kooriyaa lamaan gidduutti yeroo yaaadamu miti&apos;&apos; jedhu ibsi bahe.
&apos;&apos;Inni namticha qaanii hin beekne,&apos;&apos; jechuudhaan Muun qeequ.
Kooriyaan Kaabaa shaakalli waraanaa amma jiru waliigaltee nageenyaa Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp fi Pirezidanti Muun irra qaqqaban cabsaa jetti.
&apos;&apos;Waraana shaakalaa jiru,&apos;&apos; jetti Kooriyaan Kaabaa duraan ibsiteetti.
Xalayaa Mr. Tiraampiif Kiim Joong-un barreessan shaakalli waraanaa kun barbaachisaa hin turre jechuun komatu.
Dubbi himaan Dachee Kooriyaa deebisanii tokkoomsuu Kooriyaa Kaabaa &apos;&apos;Kana booda qondaaltoota Kooriyaa kibbaa wajjin mari&apos;achuuf jecha himnu hin qabnu,&apos;&apos; jedhanii &apos;Korean Central News Agency &apos;tti himan.
Kiim Jongi-un Kooriyaa Kibbaa waliin &apos;seenaa haaraa&apos; hojjechuuf waadaa galan